Fundisa Intsha Ukusebenzisa I-Internet Ngokuqapha | Usizo Lomkhaya
Phaphama! | Meyi 2014
ULIMI ISpanishi Isi-Albania Isi-Amharic Isi-Arabhu Isi-Armenia Isi-Efik Isi-Estonia Isi-Iceland Isi-Igbo Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Ukraine Isi-Urdu IsiBhunu IsiBislama IsiBulgaria IsiCebuano IsiChewa IsiCroatia IsiCzech IsiDanishi IsiDashi IsiFiji IsiFinishi IsiFulentshi IsiGeorgia IsiGreki IsiHebheru IsiHiligaynon IsiHungary IsiJalimane IsiJapane IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKirundi IsiKorea IsiLatvia IsiLingala IsiLithuania IsiLozi IsiMacedonia IsiMalagasy IsiMalta IsiMyanmar IsiNgisi IsiNorway IsiNtaliyane IsiPedi IsiPolishi IsiPunjabi IsiPutukezi IsiQuechua (Sase-Ayacucho) IsiQuechua (SaseCuzco) IsiRashiya IsiRomania IsiSamoa IsiSerbia IsiSerbia (SesiRoma) IsiShayina SesiCanton (Esenziwe Lula) IsiShayina SesiCanton (Sezinhlamvu Zakudala) IsiShayina SesiMandarin (Esenziwe Lula) IsiShayina SesiMandarin (Sezinhlamvu Zakudala) IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSuthu (SaseLesotho) IsiSwahili IsiSwidi IsiTagalog IsiThai IsiTigrinya IsiTonga IsiTsonga IsiTswana IsiTurkey IsiTwi IsiVietnam IsiXhosa IsiZulu
USIZO LOMKHAYA | UKUKHULISA IZINGANE
Fundisa Intsha Ukusebenzisa I-Internet Ngokuqapha
Imibiko yezindaba inikeza umuzwa wokuthi i-Internet iyisidleke sokusetshenziswa iziqhwaga, abantu abahlukumeza ngokocansi namasela antshontsha imininingwane eyimfihlo. Kuyakukhathaza lokhu, futhi kube kufanele: Umntanakho uhlale esebenzisa i-Internet futhi ubonakala echayeke ezingozini.
Ungayifundisa ingane yakho ukusebenzisa i-Internet ngokuqapha. Nokho okokuqala, cabangela izinto okufanele uzazi ngalokho okwenzeka kuyi-Internet.
Intsha ingakwazi ukungena kuyi-Internet ngomakhalekhukhwini. Umthetho wokuthi i-computer ibe sendaweni esobala endlini usasebenza. Kodwa nge-tablet noma ngomakhalekhukhwini ingane yakho ingakwazi ukungena kuyi-Internet, noma nini futhi ngaphandle kwemvume yakho.
Iqiniso lokuthi abanye abantu benza izingozi alisho ukuthi ukushayela imoto kuyicala. Isimiso esifanayo siyasebenza nasendleleni yokusebenzisa i-Internet. Ingane yakho kufanele ifunde “ukuyishayela” ngokuqapha
Enye intsha ichitha isikhathi esiningi kuyi-Internet. Enye intombazane eneminyaka engu-19 iyavuma: “Ngiyaye ngivule i-computer ukuze ngichithe imizuzu emihlanu ngibheka imiyalezo, kodwa ngigcina sengichithe amahora amaningi ngibuka ama-video. Ngidinga ukuzithiba ngempela.”
Intsha ingase ichayeke kuyi-Internet kakhulu kunokuba kufanele. Abantu abanezinhloso ezimbi bangase bahlanganise lokho okubhalwa omusha kuyi-Internet kanye nezithombe zakhe bese bethola imininingwane enjengokuthi uhlalaphi, ufunda kusiphi isikole futhi kunini lapho kusuke kungekho muntu khona ekhaya.
Enye intsha ayiyiqondi imiphumela yalokho ekusho kuyi-Internet. Izinto ozibhala kuyi-Internet zihlala kuyi-Internet. Ngezinye izikhathi izinkulumo nezithombe ezingafanele kuyaye kutholakale kamuva—mhlawumbe itholwa umuntu ongaba ngumqashi osuke efuna ukuthola imininingwane ngomuntu ofuna umsebenzi.
Naphezu kwalezi zinto ezikhathazayo, khumbula ukuthi: Internet ayiyona into embi. Kunalokho, okungaba yinkinga, ukuyisebenzisa ngendlela engahlakaniphile.
Fundisa ingane ngezinto ezibalulekile nekhono lokusebenzisa isikhathi. Ngokwengxenye, ukuba umuntu omdala okwazi ukwenza kahle izinto kuhlanganisa ukufunda ukwenza izinto eziza kuqala, kuqala. Ukukhulumisana ekhaya, imisebenzi yesikole nemisebenzi yasekhaya, yikona okubaluleke kakhulu kunokuchitha isikhathi nge-Internet. Uma kukukhathaza ukuthi ingane yakho ichitha isikhathi esiningi kakhulu kuyi-Internet, yibekele imingcele—mhlawumbe uyicuphele isikhathi uma kudingeka.—Isimiso seBhayibheli: Filipi 1:10.
Fundisa ingane ukuba icabange ngaphambi kokuba ibhale okuthile. Yisize ukuba izibuze imibuzo enjengokuthi: Ingabe lokhu engikubhalile ukhona okungamlimaza? Lesi sithombe siyolithinta kanjani idumela lami? Ingabe bengingazizwa nginamahloni uma abazali bami noma omunye umuntu omdala engabona lesi sithombe noma lo myalezo? Yini abangayicabanga ngami uma besibona? Yini mina ebengingayicabanga ngomuntu obengathumela lo myalezo noma lesi sithombe?—Isimiso seBhayibheli: IzAga 10:23.
Yisize ingane ukuba iphile ngezimiso—hhayi ngemithetho kuphela. Ngeke ukwazi ukuhlala uyibhekile njalo ukuze ubone ukuthi yenzani. Ngaphandle kwalokho, umgomo wakho njengomzali, akukona ukulawula izingane zakho, kodwa ukuzisiza ‘zisebenzise amandla azo okuqonda aqeqeshelwe ukuhlukanisa kokubili okulungile nokungalungile.’ (Hebheru 5:14) Ngakho, esikhundleni sokugcizelela kakhulu imithetho nesijeziso, gcizelela izimiso ezinhle zokuziphatha enganeni yakho. Hlobo luni lwedumela efuna ukuba nalo? Yiziphi izimfanelo efuna ukwaziwa ngazo? Umgomo wakho uwukusiza ingane ukuba yenze izinqumo ezihlakaniphile, ngisho noma wena ungekho.—Isimiso seBhayibheli: IzAga 3:21.
“Izingane zazi okuningi ngezobuchwepheshe. Kuyilapho abazali bazi okuningi ngokuphila”
Njengoba kunjalo ngokushayela imoto, ukusebenzisa i-Internet, kudinga ukwahlulela okuhle—hhayi nje ikhono lokusebenzisa izinto zobuchwepheshe. Ngakho-ke, isiqondiso sakho njengomzali sibaluleke kakhulu. Empeleni, kunjengoba nje uParry Aftab, onguchwepheshe wokusetshenziswa kwe-Internet ngokuqapha ephawula: “Izingane zazi okuningi ngezobuchwepheshe. Kuyilapho abazali bazi okuningi ngokuphila.”
“Niqiniseke ngezinto ezibaluleke kakhulu.”—Filipi 1:10.
“Koyisiphukuphuku ukuqhuba ukuziphatha okubi kunjengomdlalo, kodwa ukuhlakanipha kungokomuntu onokuqonda.”—IzAga 10:23.
“Londa ukuhlakanipha okusebenzayo kanye nekhono lokucabanga.”—IzAga 3:21.
NgokukaKenneth Ginsburg noSusan FitsGerald, “Ngaphambi kokuba ingane yakho iqale ukusebenzisa i-Internet, kumelwe ukuba kakade isiyazibonakalisa lezi zimfanelo ezinhle ezihlanganisa umusa, ukuzithiba nokubekezela—ngoba zizovivinywa.”—Letting Go With Love and Confidence.
Ukukhulisa Intsha Umshado Nomndeni
Thumelela Thumelela Fundisa Intsha Ukusebenzisa I-Internet Ngokuqapha
ISIHLOKO ESISESEMBOZWENI Izindlela Eziyinhloko Zokubhekana Nokucindezeleka
USIZO LOMNDENI Fundisa Intsha Ukusebenzisa I-Internet Ngokuqapha
INGXOXO NOTHILE Udokotela Ohlinzayo Uchaza Ngokholo Lwakhe
Ukuzingelwa Kwabathakathi EYurophu
UMBONO WEBHAYIBHELI Ukuzindla
Ukuhlakanipha Kuyamemeza​—Ingabe Uyakuzwa?
Ingabe Ngikulungele Ukuphola?
Okubhaliwe Izindlela zokudawuniloda izincwadi PHAPHAMA! Izindlela Eziyinhloko Zokubhekana Nokucindezeleka
Thumelela Thumelela PHAPHAMA! Izindlela Eziyinhloko Zokubhekana Nokucindezeleka
Izindlela Eziyinhloko Zokubhekana Nokucindezeleka
PHAPHAMA! Izindlela Eziyinhloko Zokubhekana Nokucindezeleka